Ngwa Yurie BSF • Yurie BSF
Ngwa Yurie BSF
Yuria | Nov 22, 2018 | Download ngwa Yurie BSF na Playsrore
Ngwa Yurie BSF bụ mmemme nke eji aka ama kee, iji nyere aka mepụta mmepe BSF ada site na akwukwọ na nkuzi vidio iji mepụta usoro ihe ịga nke ọma Maggot ehi/ hoard odorless.
Yurie BSF na-emepụta ngwa na-eji usoro okwu mmemme nke ọma. Nke a bụ LIVE Nkata na-enweghị ịhapụ ma ọ bụ pụọ na ngwa ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na enwere ajụjụ ndị ị nwere ike ibute ozugbo.
E wezụga ịbụ ọkaibe, faịlụ ahụ dị ntakịrị na ìhè, nke bụ 17 MB. Nke mere na ọ gaghị ebufe ekwentị onye ọrụ.
Ihe ọzọ bụ ngwa Yurie BSF na-esonyere nzọụkwụ nzọụkwụ SOP iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ọrụ iji akụkụ ọ bụla nke ihe mmụta dị na ngwa ahụ.
Ihe kacha baa uru bụ n'ihi na ngwa a nwere ike iji otu onye ọrụ na-emekọrịta ihe. Ya mere, ọ bara uru maka ndị ọrụ Yurie BSF. Download ngwa Yurie BSF
Kedu ụdị bụ Yurie BSF Ngwa?
E nwere ụdị edemede dị iche iche site na ngwà ahụ dị na ụlọ ahịa. Mgbe ahụ, ngwa ngwa Yurie BSF gụnyere na ụdị edemede?
Tinyere na nke a bụ iji melite arụmọrụ na ọrụ nke a gam akporo smartphone. Ihe Nlereanya: Nchedo 360, Ezigbo Nna-ukwu, Google Translate, Greenify, Recorder Audio, etc.
Ụdị ụdị ngwa ngwa na-eme ka ndị ọrụ jikọọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe nlele: Facebook, Instagram, Twitter, Google, etc.
Na-enye ndị ọrụ ọrụ site na nkata ma ọ bụ olu. Ihe atụ: BBM, WhatsApp ozi, LINE, Facebook ozi, WeChat, KakaoTalk, wdg.
A na-eji ngwa ngwa ngwa a maka atumatu foto. Ihe atụ: Camera360, PicsArt, B612, Magisto, MomentCam, na Adobe Photoshop, wdg.
Ngwa na ozi na magazin
Ngwa News na magazin Ngwa bụ ngwa ngwa ma ọ bụ magazin nwere ike ịgụ na HP Ihe Nlereanya: BaBe, Kurio, Detik, VivaNews, Kompas, wdg.
Ihe mmemme bụ ihe ntụrụndụ. Ihe atụ: egwu, egwuregwu, TV, iji gụgharịa vidiyo.
Ngwa Yurie BSF wee banye n'ụdị a, ya bụ akwụkwọ agụmakwụkwọ. N'ozuzu, eji ngwa a na-enyere aka na agụmakwụkwọ. Ihe Nlereanya: Egwuregwu Agụmakwụkwọ Ụmụaka, Smart Kids, Smart Mathematics, Duolingo: Ọmụmụ Ịkụziri Egwuregwu, na ihe ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na ngwa Yurie BSF bụ agụmakwụkwọ n'onwe ya, ngwa a abụghị onye nweere onwe ya ka ndị ọrụ wee nwekwuo ihe mmụta na-enweghị nsogbu site na mgbasa ozi.
Mgbasa ozi nke a na-enyekarị bụ iji nweta ego akwụ ụgwọ site na ndị mgbasa ozi. Nke a pụtara na ngwa Yurie BSF na-enweghị mgbasa ozi enwetaghị ego ọ bụla n'aka onye ọrụ ahụ.
Nke a bụ ezigbo Yurie BSF na-achọ ịkekọrịta 100%.
Kedu ihe dị na ngwa Yurie BSF?
Enwere ọtụtụ atụmatụ na ngwa a, ya bụ
Nkuzi nke BSF nke oge a n'enyeghi ya
AKWỤKWU 100% efu
Silver Plus ngwugwu
Ngwongwu ọla edo
Ngwongwu Gbasara Gold
Platinum Plus ngwugwu
Yurie BSF Nchịkọta Isi
Anụ anụ anụ ọkụkọ
Anụ anụ ụlọ
Banyere anyị Yurie BSF
Yurie BSF bụ naanị ụlọ ọrụ ahụ na-azụlite Maggot BSF nke oge a n'anwụghị n'ụwa.
Mmeputa nke ahihia odorless na-eji ihe mkpofu, ihe mkpofu, anụ anụ. Ịzụlite ikpuru odorless anaghị amata nsị, ọ dịghị eji ọgwụ ọjọọ eme ihe ma ọ dịghị mkpa igwe.
Ya mere, mmepụta ikpuru dị mfe na ọnụ ala, n'etiti Rp. XUMX-Rp. X NUMX kwa kilogram
Onyinye a nye ndi enyi bu ndi enyi enyi Yurie BSF ndi na-ere ugwo ha na Yurie BSF.
Ebumnuche nke enyemaka a bụ maka ndị enyi Yurie BSF iji mekwuo mmepụta nke ha na ikpuru na Yurie
Na nke a atụmatụ nkuzi vidio dị iche iche na -emegharị maggot cultivation enweghị isi. Naanị ị na-ele ma na-eme ya dịka ntụziaka dị n'ime vidiyo.
A naghị ekpughere vidiyo nkuzi na njirimara a na mgbasa ozi na youtube. Maka na a na-enye vidio na akwụkwọ a kpọmkwem maka ndị enyi Yurie.
N'ịmụta ịzụlite 100% efu n'efu, ngwugwu a bụ kpọmkwem maka ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ ngwugwu. Usoro na ọnọdụ biko kpọtụrụ Mbak Yurie na 0812-2105-2808.
Gịnị kpatara ngwa Yurie BSF ji dị mkpa?
N'ihi na ngwa a bụ ngwá ọrụ na omume nke ịzụlite ikpuru na-enweghị isi
Tupu ị na-eme ihe, ịnwere ike ịmụta site na ịle vidiyo na nkuzi ahụ. Ya mere, mgbe ị gara n'ugbo a nwere nkọwa mbụ.
Mgbe emechara, enwere obere ihe anyị na-echefu, ma ọ bụ chọọ ikwenye onwe anyị mgbe anyị na-arụ n'ụlọ, mgbe ahụ, ị ​​ghaghị iweghachi nkuzi vidio a.
Ewelite mmelite kachasị ọhụrụ ma vidiyo na akwụkwọ dị mkpa site na ngwa a, yabụ ebe ọbụla ị ga-enweta ọkwa ọhụụ na mmelite kachasị ọhụrụ banyere nsị anụ na-enweghị isi.
Ma maka ndị na-amalite na ndị agadi ga-achọ ka mmelite mmepe azụmahịa na-ezite ozi na ngwa a.
Kedu ka Yurie BSF Ngwa si kọwaa Ọganihu nke Maggot Animals?
N'ihe omume, ọ dị mkpa maka nduzi na-enweghị isi. Na nkebi nke ime ya.
A haziri usoro vidio ahụ na ngwa ahụ n'ụzọ dịka ị ga-esi bụrụ usoro nzọụkwụ site na nhazi ma nwee SOP (usoro ọrụ arụmọrụ). Ya mere na enwere uzo nke uzo oru ma obu ihe ndi choputara ka enwere uzo (obugh nguzo)
Ndị enyi Yurie n'ebe niile site n'ịgbaso ntuziaka ndị dị na ngwa a na-atụ anya na ha ga-ebute ihe ubi nke ọtụtụ narị kilogram nke ikuru na-erughị ọnwa 1,5.
Na otu esi eme nke a bụ site n'ịgbaso nkuzi vidio dịnụ. Ya mere, ngwa a dị oke mkpa ma dị ezigbo mkpa iji nweta ihe mgbaru ọsọ mmepụta nke oke na uru na-enweghị isi.
Uru na ojiji nke Yurie BSF Ngwa
Enweghị nrụgide n'ihi na ọrụ ndị ahụ doro anya
Na-emelite mgbe niile
E nwere ụzọ dị iche iche a ga-esi belata iji belata njehie na nkwụsị.
Ngụpụta azụ na-enwekarị obi ike na onwe
Nhazi ọzọ n'usoro imepụta oke nkuru.
Ejiri ụkpụrụ omume mee ihe
Nwee usoro nyocha iji meziwanye mmepụta
Nwee ndu iji nyochaa ọrụ a meworo.
Ịmepụta agbụrụ nchedo na nke ọma iji mee ngwa ngwa.
Nhazi na oru oma.
Ọ bụ ụkpụrụ nduzi n'iji mezuo nsị kwa ụbọchị.
Zere ọrụ na-ekpochapu ọkụ.
Ọ bụrụ na e nwere njehie, ọ dị mfe ịchọgharị na nyocha
Usoro ọrụ ahụ bụ ihe a na-akwụghasị ma nwee ike ịga nke ọma n'ọnọdụ.
Nchịkọta nke Yurie BSF Ngwa
Ntuzi nkuzi na ngwa ahụ bụ ngwá ọrụ na ihe na-aga nke ọma na-emepụta ihe na-enweghị isi.
Ngwa a na-enwe mmetụta dị ukwuu na mkpụrụedemede na-aga nke ọma nke owuwe ihe ubi ọtụtụ narị karọ na ihe na-erughị ọnwa 1,5.
Ịgbaso ntuziaka dị na ngwa ahụ na-eme ka ị hụ na ị ga-enwe ọganihu n'ime mmepụta nnukwu oke, mmepụta na-aga n'ihu, n'enweghị nchekasị, nchebe, ntụsara ahụ, ma nwekwuo obi ike nwere ike ịmepụta ihe ọkụkụ maka ogologo oge.
Download ngwa Yurie BSF
Nọgidenụ na-amụ ihe
Ọnọdụ 99 nke Maggot na-enweghị Bau Ranch
Nnyocha nke anọ nke Maggot Cultivation Scale
Ahịa na Ịzụ na ire Maggot
Map Map Yurie BSF
Enweghị ihe ndị metụtara ya!
Ihe Nlekọta 2019
Atụmatụ ndị ọkachamara
Ọnọdụ 99 nke BSF Maggot Farm
Zụrụ ma na-ere Maggot BSF na otu esi esi ere ahịa Maggot
Ego Enyemaka maka Ndị Enyi
Ego nri aka nri
Jikọọ na obodo Maggot n'enweghị ụcha
Adreesị ozi-e *
Ịba ụba nke Production nke Catfish na Probiotics
Mee 5-7 Day Fish-Feeding Fishfish
Otu esi eme ka nri nchịkọta 2019 kacha ọhụrụ
BSF ikpuru na mmanụ nkwụ pulp maka nri azụ
Fermented Coconut Dregs na Tofu Dregs na EM4
maggot akụrụ maggot na-akọ ihe ka ọ ghara ịnụ ísì ikpuru Azụ azụ Africa Ugbo nke maggot nwa agha Maggot BSF usoro ihe ubi maggot na-akọ ihe na-enweghị isi ịkọ nri nke ikuku mmiri ịkọ nke maggot na bran maggot cultivation na em4